Jọn Onye Na-eme Baptizim Ajụọ Ihe Bụ́ Ọrụ Jizọs | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 11:2-15 LUK 7:18-30
JỌN ONYE NA-EME BAPTIZIM AJỤỌ AJỤJỤ GBASARA ỌRỤ JIZỌS
JIZỌS ETOO JỌN
Jọn Onye Na-eme Baptizim nọ n’ụlọ mkpọrọ kemgbe ihe dị ka otu afọ ugbu a. Mana, ọ ka na-anụ banyere ọrụ ebube ndị Jizọs na-arụ. Chegodị otú obi dị ya mgbe ndị na-eso ụzọ ya gwara ya na Jizọs kpọlitere nwa otu nwaanyị di ya nwụrụ n’obodo Nen n’ọnwụ. Ma, Jọn chọrọ ịnụ n’ọnụ Jizọs ma ọ̀ bụ ya bụ Mesaya ahụ. N’ihi ya, Jọn gwara mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha gakwuru Jizọs. Gaa mee gịnị? Ọ gwara ha ka ha jụọ Jizọs, sị: “Ọ̀ bụ gị bụ Onye ahụ nke na-abịa, ka ànyị ga-atụwa anya onye ọzọ?”—Luk 7:19.
Ajụjụ a Jọn jụrụ ò yiri ajụjụ na-ekwesịghị ekwesị? Jọn bụ ohu Jehova. Mgbe ọ na-emekwa Jizọs baptizim n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga, ọ hụrụ ka mmụọ nsọ bekwasịrị Jizọs n’isi, nụkwa mgbe Chineke kwuru na ihe Jizọs masịrị ya. O nweghị ihe mere anyị ga-eji chewe na okwukwe Jọn esikwaghị ike. A sị na okwukwe ya esighịzi ike, Jizọs agaraghị ekwu okwu ọma banyere ya otú ahụ o kwuru ya mgbe ahụ. Ma, ọ bụrụ na Jọn anaghị enwe obi abụọ banyere onye Jizọs bụ, gịnị mere o ji jụọ ụdị ajụjụ ahụ ọ jụrụ banyere Jizọs?
O nwere ike ịbụ na Jọn chọrọ ịnụ n’ọnụ Jizọs ihe ga-eme ka obi sie ya ike na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ. Ihe a ga-eme ka okwukwe ya sikwuo ike n’agbanyeghị ọnọdụ ọjọọ ọ nọ na ya n’ụlọ mkpọrọ. O yikwara ka ò nwere ihe ọzọ mere Jọn ji jụọ ajụjụ a. Ọ ma amụma Baịbụl ndị kwuru na Onye Chineke E Tere Mmanụ ga-abụ eze nakwa onye nzọpụta. Ma, ọtụtụ ọnwa agaala kemgbe e mechara Jizọs baptizim, Jọn ka nọ n’ụlọ mkpọrọ. N’ihi ya, Jọn na-ajụ ma è nwere onye ọzọ na-abịanụ ga-anọchi Jizọs, onye ọ ga-abụzi ya ga-emezucha ihe niile e kwuru na Mesaya ga-eme.
Kama ịgwa ndị na-eso ụzọ Jọn, sị: ‘Ee ọ bụ m bụ onye ahụ na-abịa,’ Jizọs mere ka ha hụ ihe na-egosi na ọ bụ Chineke nyere ya ikike o ji gwọọ ọtụtụ ndị na-arịa ụdị ọrịa dị iche iche. Ọ gwaziri ndị na-eso ụzọ Jọn, sị: “Gaanụ kọọrọ Jọn ihe unu na-anụ na ihe unu na-ahụ: Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-ejekwa ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ, a na-ezikwa ndị ogbenye ozi ọma.”—Matiu 11:4, 5.
O nwere ike ịbụ na ajụjụ a Jọn jụrụ gosiri na ọ na-atụ anya na Jizọs ga-eme ihe karịrị ihe ndị ahụ ọ nọ na-eme nakwa na ọ ga-akpọpụta ya n’ụlọ mkpọrọ. Ma, Jizọs gwara ya ka ọ ghara ịtụ anya ihe karịrị ọrụ ebube ndị ahụ ya na-arụ.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn lawara, Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ na Jọn karịrị onye amụma. Ọ bụ “onye ozi” Jehova e buru amụma ya na Malakaị 3:1. Ọ bụkwa ya bụ Ịlaịja onye amụma ahụ e kwuru okwu ya na Malakaị 4:5, 6. Jizọs kwuru, sị: “N’ezie, ana m asị unu, n’etiti ndị ụmụ nwaanyị mụrụ, ọ dịbeghị onye e mere ka o bilie nke ka Jọn Onye Na-eme Baptizim ukwuu; ma onye ka nta n’alaeze eluigwe ka ya ukwuu.”—Matiu 11:11.
Mgbe Jizọs sịrị na onye ka nta n’Alaeze eluigwe ka Jọn ukwuu, ihe ọ na-ekwu bụ na Jọn agaghị anọ n’Alaeze eluigwe. Jọn kwadebere ụzọ maka Jizọs, ma, ọ nwụrụ tupu Kraịst emeghee ohere maka ndị mmadụ ịga eluigwe. (Ndị Hibru 10:19, 20) N’agbanyeghị na Jọn agaghị aga eluigwe, ọ ka bụ onye amụma kwesịrị ntụkwasị obi nke Chineke. Ọ ga-esokwa ná ndị Alaeze Chineke ga-achị n’elu ụwa.
Gịnị mere Jọn ji jụọ ma Jizọs ọ̀ bụ onye ahụ nke na-abịa ka ọ̀ bụ ya tụwa anya onye ọzọ?
Olee amụma ndị Jizọs sịrị na Jọn Onye Na-eme Baptizim mezuru?
Gịnị mere na Jọn Onye Na-eme Baptizim agaghị aga eluigwe?
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Mesaya
Ị̀ ma na Baịbụl buru amụma na Mesaya ga-anwụ tupu ya arụchaa ọrụ ya?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jọn Chọrọ Ịnụ n’Ọnụ Jizọs ma Ọ̀ Bụ Yanwa Bụ Mesaya Ahụ
jy isi 38 p. 96-97